Shirkan oo looga hadlayey Xeerarka hirgelinta Halgabka iyo Liltirka shaqaalahaha dawladda Puntland ayaa maanta ka furmay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya.
Shirka ayaa diiradda lagu saarayey sidii loo hirgelin lahaa sanduuqa Hawlgabka shaqaalaha (Pension Fund)oo ay iska kaashan doonaan dawladda Puntland iyo Baanka Adduunka. Maadaama ay lagama maarmaan noqotay in ay xuquuq yeeshaan shaqaalaha muddada dheer usoo shaqaynayey dawladda xilliga ay hawl-gabaan.
Sidoo kale waxaa looga hadlay Liltirka shaqaalaha (Pay and Grading) taasoo looga gol-leeyahay in tayada aqooneed iyo xirfadeed ee shaqaalaha ay ku kala qiimaysnaadaan xuquuqohooda shaqo si kor loogu qaado tayada Shaqaalaha dawladda.
Shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay Masuuliyiin ka socotey Madaxtooyada, Wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, Wasaaradda Maaliyadda, Hay’adda shaqaalaha Rayidka ah iyo Mashuuraca Tayaynta Hay’adaha dawladda ee CIP.